किन मानिस मर्ने कारणहरु जान्नु आवश्यक छ? – iNews16
किन मानिस मर्ने कारणहरु जान्नु आवश्यक छ?
शको स्वास्थ्य प्रणालीको प्रभावकारिताको आकलनका लागि कुन रोगले मानिसहरूलाई कसरी असर गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी लिनु र तथ्याङ्क राख्नु एकदमै महत्वपुर्ण रहन्छ। एक देशको स्वास्थ्य प्रणालीको प्रभावकारिताको आकलनको लागि साथै रोग र चोटपटकहरूले मानिसहरूलाई कसरी असर गरिरहेका छन् भन्ने जानकारीको लागि पनि मानिसको मृत्युको तथ्याङ्क आवश्यक छ।
मृत्युको तथ्याङ्क स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई उनीहरूको सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यहरूको फोकस निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ। हृदय रोग र मधुमेहको कारण मृत्यु भएको देशहरूमा केहि वर्षको अवधिमा यी रोगहरू रोक्न मद्दत गर्न जीवनशैलीलाई प्रोत्साहित गर्न जोडदार कार्यक्रम सुरू गर्न कडा चासो राखियो । त्यस्तै, यदि कुनै देशले थाहा पायो कि धेरै बच्चाहरू निमोनियाले मरेका छन्, तर बजेटको सानो हिस्सा मात्र प्रभावकारी उपचार प्रदान गर्न समर्पित छ भने यसले यस क्षेत्रमा खर्च बढाउन सक्दछ।
उच्च आय भएका देशहरूमा मृत्युका कारणहरूको जानकारी संकलन गर्न प्रणालीहरू छन्। धेरै कम र मध्यम आय भएका देशहरूसँग त्यस्तो प्रणाली छैन, र विशेष कारणहरूले गर्दा हुने मृत्युको संख्या अपूर्ण डाटाबाट अनुमान लगाउन पर्दछ। स्वास्थ्यको सुधार गर्न र यी देशहरूमा मृत्यु रोकथामको लागि उच्च गुणस्तरको मृत्युको तथ्याङ्क उत्पादन गर्न महत्वपूर्ण छ
Previous काठमाडौं हि‌’डेको या’त्रुबस सुन’को’सीमा ख’स्यो पूरा पढ्न को लागि रि’प ले’खेर खो’ल्नुहोस
Next कोरोनाविरुद्ध लड्न एडिबीले नेपाललाई दियो ३६ करोड अनुदान
अमेरीकामा पानीबाट सर्ने डरलाग्दो रोगले ८ बच्चाको निधन पछि हाई अलर्ट, यस्ता देखिन्छन् लक्ष्ण
थप ९ कम्पनीको स्यानिटाइजर बिक्री तथा बितरणमा रोक
धरानमा कोरोना सं’क्रमित महिलाको मृ’त्यु, पत्रकारसहित १४ जनामा संक्रमणको पुष्टि